I-Duke® Frost Acrylic lukhetho olufanelekileyo lokuphosa i-acrylic sheet ehambisa indawo entle, ebunjiweyo kwicala elinye. Ngesongezo seqhwa esifakwe kulo lonke iphepha, amashiti aqanduselweyo angenziwa ngokulula ngaphandle kokulahleka okubonakalayo kweqabaka, nkqu nakwimigca egobile. Umdlalo omkhulu wokwahlula igumbi / iofisi, iipryry / iingcango zekhabhathi, imiqondiso kunye nemiboniso yePOP.
Ishidi le-acrylic eliqingqiweyo lolunye uhlobo olukhulu kwiglasi enqabileyo kunye nesanti. I-Duke® acrylic inikezela ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu, kunye neepropathi ukufezekisa oku kubonakala ngelixa ivumela ukuhanjiswa okuphezulu kokukhanya ukuba kudlule kwiphepha.
Ubisi oluMhlophe lwePhepha eliMhlophe
Ukumelana kakhulu neemeko zemozulu; ukumelana nokuvezwa lilanga elishushu, kubanda kakhulu, utshintsho lobushushu ngesiquphe, ukutshiza amanzi ngetyuwa kunye nezinye iimeko ezibi
Ngaba ngokulula sawed, ngomshini, thermoformed, kwaye isamente
Ukusasazeka kokukhanya okugqwesileyo kunye nendawo encinci yokubuyela umva
Isebenza kakuhle nge-White kunye ne-RGB ye-LED kwaye inokusetyenziswa ngevinyl yemibala yesiko kunye nezitayile
Ukuxhathisa kweyona mpembelelo iphezulu kwiklasi yayo, ukuxhathisa ukwahlukana ngexesha lokugcina, kungamampunge, ukuhambisa ngenqanawa kunye nokufakwa
Ukulungiswa kokusetyenziswa kwee-LED kunye nayo yonke eminye imithombo yokukhanya
Thermoforms kumaqondo obushushu asezantsi, kwaye ayifuni ukumiswa kwangaphambili phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ukunciphisa iindleko zabasebenzi kunye namandla ngelixa kusonyuswa
Iphepha le-Acrylic eliMhlophe
Iphepha le-Ivory White Acrylic
Iphepha le-White White Acrylic
Umbala weTint Acrylic Sheet
Ngokukhetha imibala eyahlukeneyo, iphepha le-acrylic ekumgangatho ophezulu linikezela ngokuchasene nefuthe kunye nokumelana nemozulu. Ubunzima obuphezulu beemolekyuli benza ukuba amaphepha alungele phantse naluphi na uhlobo lokungunda okanye i-glazing. Ifanelekile kwizicelo ezahlukeneyo kubandakanya imiboniso ye-POP, ukukhanya kwezulu, amagumbi okukhanya kwelanga kunye neempawu, ezifumaneka kuluhlu olubanzi lokuqina kunye nobukhulu.
Ukuhanjiswa: 20% ~ 50%
Umbala oGreen we-Acrylic Sheet
Iphepha le-Duke® elinombala we-acrylic linika abayili kunye nabenzi be-aesthetics ezibalaseleyo, ubhetyebhetye ekugqibeleni kunye nokuchasana nefuthe eliphezulu.
Imibala eguqukayo / eqinileyo
Yenziwe nge-100% ye-Mitsubishi MMA eyintombi
Ukuhanjiswa kokuKhanya kweBaspoke
Iphepha elitsha le-Acrylic Sheet
Umbala oMthubi we-Acrylic Sheet
Iphepha leSapphire Blue Acrylic